Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny vehivavy Thailandey dia maty ora maro taorian'ny vaksinin'ny COVID-19 » Page 2
Misy ambaratonga 3 ny fanampiana ara-bola voalohany - hatramin'ny 100,000 baht (US $ 3,216) ho an'ny fitsaboana manaraka, hatramin'ny 240,000 baht (7,720 400,000 $ amerikana) noho ny fahaverezan'ny taova na fahasembanana misy fiantraikany amin'ny fiainana, ary hatramin'ny 12,866 baht (US $ XNUMX XNUMX) noho ny aretina na fahasembanana maharitra.
Hatramin'ny 7 Jona 2021, ny Office National Security Security Office dia efa nahazo fangatahana fanampiana ara-bola ho an'ny olona 386 izay mijaly noho izany Vaksiny COVID-19. Ny tambin-karama dia naloan'ny 262 amin'ireo tranga izay nahitana olona 4 maty. Ity tranga fahafatesan'ny vehivavy 46 taona vao tsy mbola nahazo fanampiana ity dia nanamafy i Dr. Jadej.
Ny fanehoan-kevitra mahazaka ny Vaksiny fanefitra covid-19 dia fantatra amin'ny anarana hoe anafaksaksis. Anaphylaxis dia fanehoan-kevitra mahery vaika mandrahona ny ainy izay tsy dia misy aorian'ny vaksiny nefa mbola mitranga. Matetika ny soritr'aretina dia mivoatra haingana ary mety ahitana fofonaina fohy, fanaintainan'ny tratra, mahatsiaro ho torana, mamontsina, ary tsy mahatsiaro tena.
Raha ny filazan'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia tokony harahi-maso eny an-toerana ny olona rehetra mahazo vaksinin'ny COVID-19. Ireo olona izay nanana fihenan-tsasatra mahery vaika na izay nisy karazana fiakaran'ny aretim-po avy hatrany amin'ny vaksinina na fitsaboana tsindrona dia tokony harahi-maso farafahakeliny 30 minitra aorian'ny nahazoana ilay vaksiny. Ny olon-kafa rehetra dia tokony harahi-maso farafahakeliny 15 minitra aorian'ny nahazoany vaksininy.